Budata Gacha Star Apk maka gam akporo [Egwuregwu Kacha ọhụrụ] - Luso Gamer
Budata Gacha Star Apk maka gam akporo [Egwuregwu Kacha ọhụrụ]
Ndị mmepe ahụ ahaziri ma wepụta ọtụtụ mbipụta Gacha. Agbanyeghị taa egwuregwu egwuregwu anyị na-akwado ebe a ka agbanweela kpamkpam. Ugbu a ijikọ mbipụta ọhụrụ a nke Gacha Star ga-eju ndị Fans anya na agwa na njirimara ọhụrụ.
Gacha adịlarị ewu ewu n'ihi njirimara pụrụ iche na nke dị elu. Ọbụna ndị mmepe na-akụ ọtụtụ obere egwuregwu nwere nhọrọ studio n'ime maka ndị fan. Ka ị na-ekpori ndụ n'efu na-eji mkpụrụedemede arụnyere n'ime egwuregwu ndị ahụ. Ọzọkwa, ndị egwuregwu nwekwara ike ịnụ ụtọ isonye na agwa nrọ.
Ụdị ụdị ọhụrụ a adịghị maka ndị egwuregwu. Agbanyeghị, anyị na-eme nke ọma n'iweta ụdị egwuregwu arụ ọrụ maka ndị egwuregwu. N'ihi ya, ị bụ ụmụ okorobịa dị njikere ịnụ ụtọ ọhụrụ a gbanwetụrụ Egwuregwu 2D wee wụnye ya n'ime android smartphone.
Kedu ihe bụ Gacha Star Apk
A na-ekewa Gacha Star Android n'etiti egwuregwu nkịtị n'ịntanetị. Mana egwuregwu a abụghị naanị na ọ na-elekwasị anya na nkịtị mana ọ nwekwara ike ịnye dashboard omenala a dị elu. Nke ahụ na-enyere ndị Fans aka ịhazi ya gbakwunyere ijikwa akụrụngwa nke ọma.
Mgbe anyị lelee ma chọpụta ụdị egwuregwu egwuregwu gọọmentị. Anyị hụrụ na ọ dị nro yana ọgaranya na akụrụngwa pro dị ka Live Customizer, Characters, Uwe, Uwe ntutu, ngwa ọgụ na ndị ọzọ. Mana mgbe a bịara n'ịnweta ozugbo.
Mgbe ahụ ndị egwuregwu nwere ike ịchọ ịzụta ndenye aha adịchaghị na ikike ọkachamara. Na-etinyeghị ezigbo ego, ọ dị ka ọ gaghị ekwe omume maka ndị na-egwu egwuregwu ịnụ ụtọ akụrụngwa ndị ahụ. Mana ugbu a atụmatụ pro ndị a niile gụnyere ndị editọ nwere ike iru n'ime ụdị gbanwetụrụ.
Maka n'efu na-enweghị ndenye aha ma ọ bụ ndebanye aha. Ewezuga nnweta ozugbo, ndị ọkachamara ahụ kpọgheekwara ihe ngbanwe dị ndụ. Nke ahụ na-enyere aka n'iwulite agwa anime ha rọrọ n'ime obere oge na-emefusịghị ihe onwunwe.
aha Gacha Star
Mmepụta Gacha Star
Aha ngwugwu ikuku.com.gacha.gachastar
Achọrọ gam akporo 4.0 na gbakwunyere
Category Egwuregwu - Casual
Usoro nke echichi na itinye n'ọrụ nke egwuregwu ngwa dị nnọọ mfe. Nke mbụ, a gwara ndị egwuregwu ka ha budata faịlụ Apk kachasị ọhụrụ na nke na-arụ ọrụ. Nke ahụ nwere ike ịnweta ndị ọrụ gam akporo ndị ọzọ si n'okpuru ebe a n'efu.
Ugbu a bido usoro nrụnye ma nwee ọ enjoyụ na mkpụrụedemede ọhụrụ yana atụmatụ n'efu. Ruo ugbu a, a na-enweta mkpụrụedemede 10 isi na 90 ndị ọzọ dị iche iche site na ịhọrọ agba dị iche iche. A na-agbakwunye ihe karịrị 600 gbakwunyere ọtụtụ oghere akụkụ.
N'iji ihe nhazi ndụ dị ndụ, ndị egwuregwu nwere ike gbanwee ma dozie ntutu, anya na ntinye ndị ọzọ n'ụzọ dị mfe. Naanị ihe ha chọrọ ime bụ naanị họrọ akụkụ ahụ wee gbanwee nha, ọnọdụ na agba ngwa ngwa. Ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị maka ịhọrọ.
Ndị ahụ bụ anụ ụlọ, ihe, agwa enyi na ndị ọzọ. The Studio mode ga-enye 10 isi agwa nwere ike zuru ezu na ike. A na-ahapụ ndị egwuregwu ka ịhọrọ ụdị dị iche iche dị iche iche na nzụlite dị iche iche.
Ozugbo emechara ndị fan ahụ site na imepụta agwa na ịhazi ya. Ugbu a, ha nwere ike itinye ederede dị iche iche n'ime igbe bụ isi wee mee ka agwa agwa okwu dị iche iche n'ụzọ dị mfe. N'ihi ya, ị dịla njikere ịnụ ụtọ ụdị egwuregwu ọhụrụ a wee wụnye Gacha Star Download.
Egwuregwu ahụ bụ n'efu ibudata.
Ịmekọrịta egwuregwu ahụ na-enye ọtụtụ atụmatụ isi.
Ndị ahụ gụnyere mkpụrụedemede anime dị iche iche.
Nhazi gụnyere ụdị ntutu, Anya, Agba akpụkpọ na ndị ọzọ.
A na-enwetakwa omenala dị iche iche.
Enwere ike iru mkpụrụedemede 10 na mkpụrụedemede 90 ndị ọzọ.
The egwuregwu interface dị mfe na 2D.
Ihe nhazi ndụ na-enyere ndị egwuregwu aka ịmepụta agwa nrọ.
Otu esi ebudata egwuregwu Gacha Star
Agbanyeghị na ndị egwuregwu nwere ike ibudata ma wụnye ụdị egwuregwu Gacha kacha ọhụrụ n'ihu ọha site na Ụlọ Ahịa Play. Mana a bịa na nbudata mbipụta dị ugbu a. Mgbe ahụ, ụdị ọrụ ahụ enweghị ike iru ebe ahụ.
Yabụ kedu ihe ndị egwuregwu gam akporo kwesịrị ime n'ọnọdụ dị otú a mgbe ha enweghị ike ịchọta mbipụta ọhụrụ a? N'ihi ya na ọnọdụ dị otú ahụ, anyị na-akwado ndị gam akporo Player gaa na anyị website. Ma budata ngwa Gacha Star kacha ọhụrụ a n'efu.
Ụdị agbanwegharịrị anyị na-akwado ebe a anaghị arịọ ikike na-enweghị isi. Ọbụna anyị wụnyere egwuregwu n'elu dị iche iche android smartphones. Na mgbe wụnye egwuregwu anyị enweghị ike ịhụ nsogbu ọ bụla n'ime.
N'ebe a na webụsaịtị anyị, anyị kesara mbipụta ndị ọzọ na mbụ. Nke ka na-arụ ọrụ ma dị mma ịwụnye n'ime smartphones. Iji nyochaa mbipụta ndị ọzọ yiri nke ahụ biko tinye egwuregwu ndị a. Ndị ahụ bụ Gacha Club Edition Apk na Gacha Club Apk.
Yabụ na ị bụ nnukwu onye ofufe Gacha ma na-achọ mbipụta gbanwetụrụ ọhụrụ. Ebe akụrụngwa gụnyere Skins, ntutu, Customizer, Characters na anu ulo ka emeghelarị iji. Mgbe ahụ, anyị na-atụ aro ka ndị egwuregwu wụnye Gacha Star App Download.
Categories Casual, Egwuregwu Tags Egwuregwu 2D, Gacha Star, Gacha Star Apk, Ngwa Gacha Star, Egwuregwu Gacha Star Mail igodo
Nbudata Anime kacha mma maka gam akporo [Ihe nkiri]
Nbudata NS dị ka Apk maka gam akporo [Insta Liker]